Hidhaa fi ajjeechaan ummata Oromoo irraa haa dhaabbatu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHidhaa fi ajjeechaan ummata Oromoo irraa haa dhaabbatu!
(qeerroo)—Waggaa 27 sirni EPRDF dhaabbilee afur hogganu, jalatti ilmaan Oromoo jimlaan ajjeefamaa, miliyoonaan lafarraa buqqaa’aa yoona geenye ammas sanuma. Dabalataan yakka ulfaataan sammuu Oromoo keessaa hinbanne, Jaal Nadhii Gammadaa, Wellisaa Jireenyaa Ayyaanaa fi Jaal Lammeessaa Boruu dabalatee as buuteesaanii dhoksuun reeffa isaaniillee argatee akka uummatni awwaallatee garaa hinkutanne godhanii, maatiif uummata Oromoo rooraasaa bakkee ilaalchisaa hanbisuun sirna EPRDF kan wal nama gaafachiisu miti.
Guyyaa har’aa Qeerroon Geetaachoo jedhamu Gimbii keessatti rukutamee wareegame – https://t.co/W77Z9jF7hy pic.twitter.com/ILEoxeGlZB